ဘောလုံးလောက သတင်းများ 1. မနေ့ညက လီဂါနီအသင်းကို ဘာစီလိုနာအသင်းက ၅ ဂိုးပြတ် အနိုင်ယူပြီး နောက်မှာတော့ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမား မက်ဆီ အတွက် သမိုင်မှတ်တိုင်သစ် တစ်ခုကို စိုက်ထူ လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မက်ဆီက ဘာစီလိုနာ အသင်းနဲ့ နိုင်ပွဲ ၅၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ရွှေဘောလုံးဆု ၆ ကြိမ်ရထားတဲ့ ကစားသမားက ဒီစံချိန်ကို ချိုးဖို့အတွက် ၃၂ ပွဲ ဆက်တိုက် ကစားခဲ့ရပါတယ်။ 2. အမေရိကားမှာ ဆေးစစ်ခံပြီး နောက်မှာတော့ ပေါ်တူဂီ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖာနန်ဒက်က မန်ယူအသင်းနဲ့ အောင်မြင်စွာ စာချုပ် ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ …
ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကို နောက်ကျဂိုးနဲ့ အသဲခွဲပြီး ရှုံးပွဲမရှိဘဲ အုပ်စု (က)ရဲ့ အုပ်စုဗိုလ်အဖြစ် ဆီမီးဖိုင်နယ် တတ်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအသင်း ၃၀ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအသင်းပါဝင်သော အုပ်စု က ၏ အုပ်စု နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ် မြန်မာအသင်းနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားတို့၏ ပွဲစဉ်ကို မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ၆နာရီခွဲအချိန်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြသည်။ မြန်မာအသင်းသည် အုပ်စုပထမပွဲစဉ်တွင် မလေးရှားအသင်းအား တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီ သရေရလဒ် ထွက်ပေါ်ထားပြီး အုပ်စု ဒုတိယပွဲစဉ်တွင် အိမ်ရှင် ဖိလစ်ပိုင်အသင်းကို အနိုင်ယူ ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အုပ်စု တတိယပွဲစဉ်တွင်လည်း တီမောအသင်းကို အနိုင်ရယူ ထားနိုင်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဗိုလ်ဖြင့် ဆီမီးဖိုင်နယ်တတ်ရောက်ရန် ယခုပွဲစဉ်ကို မဖြစ်မနေ အနိုင် ကစားသွားရမည် …
ဖိနပ်လေးတစ်ရံကြောင့် သူ့ဘဝကို ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲ စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာလက်ရွေးစင် ကျော်ဇင်လွင်
ဖိနပ်လေးတစ်ရံကြောင့် သူ့ဘဝကို ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲ စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာလက်ရွေးစင် ကျော်ဇင်လွင် မြန် မာ လက်ရွေးစင် နောက်ခံကစားသမား ကျော်ဇင်လွင် (၂၈) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ မှာ မြန်မာ ယူ-၂၃ နဲ့အတူ နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူဟာ ဘောလုံးသမား တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ ဘောလုံးကောက် ဘဝကနေ မြန်မာလက်ရွေးစင် ကစားသမားဖြစ်ဖို့အတွက် မလျှော့သော ဇွဲလုံလ ၊ ခိုင်မာသော စိတ်ဓါတ်၊ သည်းခံခြင်း နှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် မြန်မာဘောလုံး ဇာတ်ခုံမှာ ကျော်ဇင်လွင် ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျော် ဇင် လွင်ဟာ သူဘဝမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကစားသမားဖြစ်ဖို့အတွက် …
နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ ပွဲမစခင် အယူသီးပြီး လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့အရာများ
နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ ပွဲမစခင် အယူသီးပြီး လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့အရာများ နာမည်ကြီးကမားသမားတွေဆိုပေမယ့် သူတို့မှာ သူတို့မှာ သူတို့ယုံကြည်ချက်နဲက ခံယူချက်တွေရှိပါတယ်။တခြားသူတွေကတော့ ဒါကို ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့ ထင်စရာရှိပါလမ့်မယ်။သူတို့ဟာ ကစားပွမြစခင်နဲ့ ကစားပွဲစတဲ့အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ရေးအပြင် ကျန်တာတွေလုပ်ခဲ့တာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. Michael Jordan Michael Jordan ဟာ ကမ္ဘာကျော် ဘတ်စ်ကတ်ဘော ကစားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ သူ NBA မှာ ကစားသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ NBA ထုတ်အတွင်းခံဝတ်ပြီးကစားမှ ကံကောင်းတယ်လို့ ယူဆခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2. Kevin Rhomberg Kevin Rhomberg ဟာ MBL မှာ ဘယ်ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ကို တဖက်ကစားသမားက မထိလိုက်ဘူးဆိုရင် ဒီပွဲကို သူ ဘဝင်မကျတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့် …
မုန်းတီးသူတွေတောင် လေးစားအတုယူရမယ့် မက်ဆီရဲ့မေတ္တာဓာတ်ပြည့်ဝလွန်းတဲ့အချက် (၄) ချက်
မုန်းတီးသူတွေတောင် လေးစားအတုယူရမယ့် မက်ဆီရဲ့မေတ္တာဓာတ်ပြည့်ဝလွန်းတဲ့အချက် (၄) ချက် မက်ဆီဆိုတာ ကွင်းတွင်းမှာပဲ ပါရမီရှင်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲ ကွင်းပြင်ပမှာလည်း လောကအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ မေတ္တာရှင်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပြည့်ဝလွန်းတဲ့ မေတ္တာစိတ်၊ အနစ်နာခံစိတ်တွေဟာ တကယ့်ကိုလေးစားချီးကျုးချင်စရာပါ။ ဒါကြောင့် မုန်တီးသူတွေတောင် လေးစားရမယ့် မက်ဆီရဲ့မေတ္တာတရားပြည့်ဝလွန်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ပင်နယ်တီအား ငြင်းဆန်ခဲ့ခြင်း အခုနှစ်အစောပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မက်ဆီရဲ့လေးစားဖွယ်ရာ အပြုအမှုကို အားလုံးမေ့ကြဦးမယ်မထင်ပါဘူး။ ဗယ်လီကာနိုနဲ့ပွဲစဉ်မှာ ဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာပါ။ အဲဒီပွဲစဉ်မှာ မက်ဆီဟာ ပြိုင်ဘက်ဂိုးဧရိယာထဲမှာ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ဖျက်ထုတ်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ မက်ဆီဟာ လဲကျသွားခဲ့ပြီး ဒိုင်လူကြီး က ပင်နယ်တီအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မက်ဆီက အဲဒီဖြစ်ရပ်က ပြစ်ဒဏ်ဘောမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆန်ပြီး ဒိုင်လူကြီးပေးတဲ့ ပင်နယ်တီ …
This Month : 46564
Total Users : 395780
Total views : 1427222